सक्षमले खोल्यो दोस्रो स्याटलाइट अफिस, कोको भए सहभागी (फोटोफिचरसहित)
सक्षम नेपालले बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जमा आफ्नो क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालद्धारा बुधबार सो कार्यालयको उद्घाटन गरिएको हो । सक्षम नेपाल बेलायती सहयोग नियोगद्वारा वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि सञ्चालित एक कार्यक्रम हो । …
२१.९० प्रतिशत वोनश शेयर वितरण गर्दै फेवा विकास बैँक
फेवा विकास वैकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्मको संचित मुनाफाबाट चुक्तापुँजीको २१.९० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने भएको छ । बैँकको संचालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय नेपाल राण्ट्रबैकवाट स्वीकृत भई वैकको आठौंं बार्षिक साधारण …
मेट्रो डेभलपमेन्ट बैँक र एक्सप्रेस फाइनान्स गाभ्ने कैलाश विकास बैँकको निर्णय
नेपालको राष्ट्रिय स्तरको विकास बैँक कैलाश विकास बैँकले एउटा क्षेत्रीय स्तरको डेभलपमेन्ट बैँक र एउटा राष्ट्रिय स्तरको वित्त कम्पनि गाभ्ने निर्णय गरेको छ । बैँकको शुक्रबार सम्पन्न विशेष साधारण सभाले मेट्रो डेभलपमेन्ट बैँक र एक्सप्रेस फाइनान्स गाभ्ने सर्वसम्मत निर्ण गरेको …
बैँकर्सहरुको शुभकामनाका साथ सुरु भयो वित्तिय साक्षरताका लागि बैँकिङ खबर
वित्तिय सेवा विस्तार तथा वित्तिय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि मंगलबारदेखि बैंकिङ खबर डटकमले आफ्नो यात्रा शुभारम्भ गरेको छ । शुभारम्भको अवसरमा बैंकर्सहरुले बैंकिङ खबर डटकमसंग शुभकामना साटेका छन् । कार्यक्रमको उद्घाट्न गर्दै राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बैंकिङ जगतलाई पारदर्शी …
६ महिनामा १७ प्रतिशत बढ्यो रेमिट्यान्स
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा रेमिट्यान्स बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिनामा तीन सय २३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको …
१५ वर्षअघि विस्थापित बैँकहरु : के कारणले भएनन् पुनस्र्थापना ?
सशस्त्र द्धन्द्ध कालमा ग्रामीण क्षेत्रबाट विस्थापित सरकारी स्वामित्वका बैँकका शाखा अझै पुनस्थापित हुन सकेका छैनन् । द्धन्द्धका कारण विस्थापित भएका शाखाहरु शान्ति प्रकृयाले पूर्णता पाएको ५ वर्ष विसक्दा पनि पुनस्थापित भएका छैनन् । माओवादीले सशस्त्र गतिविधी त्यागेर शान्ति वार्तामा आएको …